तपाईंको गुगल एनालिटिक्स इन्फोग्राफिक दृश्यमा बनाउनुहोस् Martech Zone
हामी इन्फोग्राफिक्स खोज्न र साझेदारी गर्न भिजुअल.ली मनपराउँदछौं। Highbridge एक प्रमाणित डिजाइनर भिजुअल.अलिमा, एक विशाल इन्फोग्राफिक्सको साथ हामीले हाम्रो ग्राहकहरूको लागि अनुसन्धान, डिजाइन र प्रमोशन गरेका छौं।
स्थिर इन्फोग्राफिक्सको साथसाथै भिजुअल.इली टीमले उनीहरूको गतिशील इन्फोग्राफिक्सलाई बृद्धि गर्न जारी राख्दछ ... यो उत्तम जाँच गर्नुहोस्। गुगल एनालिटिक्स इन्फोग्राफिक यसले तपाईंको साप्ताहिक तथ्या .्कलाई एउटा सुन्दर डिजाइनमा तान्दछ। तपाईको इन्फोग्राफिक तपाईलाई साप्ताहिक आधारमा इ-मेल मार्फत पुर्‍याउन सक्नुहुनेछ। धेरै राम्रो!
टैग: Google विश्लेषणगुगल एनालिटिक्स इन्फोग्राफिकइंफोग्राफ़कअन्तर्क्रियात्मक इन्फोग्राफिकमार्केटिंग इन्फोग्राफिक्सदृश्य.lyनेत्रहीन
येल्प मा विज्ञापन?
सत्यको शून्य पल: तत्परताको लागि Ste कदम
मार्स 25, 2013 मा 8: 15 एएम
यो साँच्चै राम्रो छ। म अहिले धेरै समयको लागि Visual.ly प्रयोग गर्दैछु र यो वास्तवमै उत्कृष्ट सुविधाहरू मध्ये एक हो। यो साँच्चै लोकप्रिय सुविधा हुन सक्ने क्षमता छ। यो साँच्चै राम्रो देखिन्छ र यो प्रयोग गर्न साँच्चै सरल छ। हामीसँग यो साझा गर्नुभएकोमा धन्यवाद, डगलस।
मार्स 25, 2013 मा 8: 16 एएम
मँ सहमत छु, मीकल! मलाई आशा छ कि उनीहरूको विस्तार पनि विस्तारित हुनेछ।
मार्स 25, 2013 मा 9: 48 एएम
यसलाई माया गर्नुहोस्! साझेदारीको लागि धन्यवाद, डगलस।